TAORIAN’NY FANATSARANA : Handray fiadiana ny amboaran’ny Filoham- pirenena ny kianja mitafon’ i Soavita
Hakotrokotroka indray ny taranja basket-ball ao amin’ny kianja mitafon’ i Soavita Toamasina manomboka ny sabotsy 24 febroary izao. Kianja Soavita izay vao avy nasiam-panamboarana sy fanatsarana taorian’ny fahasimbana niseho vokatry ny rivodoza Ava. 22 février 2018
Ny 24 febroary ho avy izao no hanomboka ny fiadiana ny amboaran’ny Filoha ary tsy hifarana raha tsy ny alahady 4 marsa. Amin’io daty io no hatao ny lalao famaranana mandritra ny fiadiana izay ho tompondaka amin’ny amboaran’ny Filoham-pirenena eo amin’ny taranja basket-ball.
Nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety nataon-dRakotonirina Toto Jean Marc, filohan’ny ligin’Atsinanana ny taranja basket-ball no nahalalana fa ekipa 12 no handray anjara amin’ izao fiadiana ny amboaran’ny Filoham-pirenena atao eto Toamasina izao ka ny roa voalohany no hanao lalao famaranana amin’ny ekipa tafakatra avy amin’ny faritra hafa izay atao any Fianarantsoa, fifaninanana izay karakarain’ny ligy sy ny federasiona.
Ho an’ ireo ekipa miisa 12 hikatroka ao Toamasina aloha dia mitsinjara ho toy izao : ekipa efatra avy any amin’ny faritra Analamanga, efatra ihany koa ho an’ny Atsinanana ary roa avy kosa an’ny faritra Alaotra Mangoro sy Analanjirofo. Nambaran’ny filohan’ny ligy hatrany fa efa tsara fiomanana ny kilioba Ascut handrombaka ny amboara.